Ufuna ukubuyisa iGem? gem.agency yenza ukuba kube lula.
Sizabalazela ukwaneliseka kwabaxumi ngaphezu kwayo yonke enye into. Ukuba ngaphakathi kweentsuku ezingama-30 zokufumana ilitye lakho okanye awonelisekanga yi-odolo yakho, ungayibuyisela kuthi kwimeko yoqobo kunye neyonakeleyo. Amagugu anokubuyiselwa kuphela ngeli xesha lokuhlolwa kweentsuku ezingama-30.
Nceda thumela i-imeyile kwiGEMIC Return Authorization Number (wagidima) Kunye Imiyalelo Return olongezelelweyo.
QAPHELA: Orders ibuyiselwe kuthi ngaphandle wabaleka ziya wala waza wabuyela kumthumeli. imirhumo zokubopha nokuthumela ukubuyela luxanduva kumthumeli. Zonke kwiintengiso zezokugqibela emva kweentsuku 30 (izinto babuyela kufuneka postmarked zingaphelanga iintsuku 30 komhla we-odolo ifunyenwe).
Nceda andali unikezelo yeposi, ukuba unqwenela ukurhoxisa umyalelo emva kokuba ngeenqanawa, kodwa ngaphambi kokuba bunikelwe. Ukuba umyalelo saliwe, umthengi uya kuthwala uxanduva ngokupheleleyo ixabiso izinto xa konakele zonke iintlawulo zoshishino kunye nemisebenzi ezenziweyo ekubuyeni kwayo.
Kumazwe amaninzi, ibhengeze ekuthumeleni ixhomekeke nemirhumo esebenzayo amasiko kunye irhafu. Abathengi banoxanduva naziphi amasiko, irhafu kunye nemisebenzi oyityalayo. Imbuyekezo eyenziwe ngenxa ngentla ayikwazi eligunyazisiweyo.
** Zonke iimali kwenziwa ngokusebenzisa indlela efanayo intlawulo ifunyenwe. iindleko emikhombeni, inshorensi kunye nokulungiswa credit card non-ayibuyiswa. Akukho ntlawulo restocking. Amalalela ezifundiswayo.
Imibuzo Okuninzi? Qhagamshelana nathi
Khuselo no bucala
Ukhuseleko kunye nokuba ngasese
I-GEMIC ixhalabile ngokhuseleko kunye nokhuseleko lwabathengi bethu. Siqinisekisa ukuba inkqubo yethu yokuthengiselana ikhuselekile kakhulu kwaye ulwazi lomthengi wethu lukhuselekile.
Zonke iinkcukacha yentlawulo kunye ngecredit card iphathwa kwiphepha ekhuselekileyo yi PayPal. Asinayo ukufikelela ikhadi lakho letyala okanye iinkcukacha zezimali. ulwazi yokhuseleko PayPal
ILebhu ye-GEMIC iyayihlonipha imininingwane yobuqu kwiwebhusayithi yayo. Idilesi ye-imeyile ingasetyenziselwa okwethutyana ukwenza i-imeyile okanye iodolo.
Siya kuze kuthengisa idilesi yakho yemeyile, patterns, okanye naluphi na olunye ulwazi.
I-GEMIC isebenzisa iicookies zesikhangeli ukukhulisa utyelelo lwakho kunye nokwenza inqwelo yethu yokuthenga kwi-Intanethi. Akukho lwazi lomntu siqu olugcinwe kwiicookies. Iicookies kufuneka zenziwe ukuba zifikelele kuwo onke amanqaku ezindawo zethu.
Kuba imibuzo nceda uqhagamshelane nathi.
ngamana odola isatifiketi xa udibanisa kwento ukuze inqwelo yakho. Ukwenza oku, nqakraza kwikhonkco "Yongeza isatifikethi gem sale nto" kwiphepha item iinkcukacha ngaphezu "ngeza kwitshathi" iqhosha. Oku kuzakuvula iinketho isiqinisekiso.
Zonke izinto enesiqinisekiso kwiGEMIC. Siqinisekisa ukuba uhlala ufumana oko ukuhlawulayo.
Zonke iigugu kwiGEMIC ziqinisekisiwe ukuba zichaziwe. Abasebenzi bethu abaziingcali bavavanya ngononophelo kwaye balinganisa i-gem nganye.
Ilitye ngalinye elivela kwiGEMIC liligugu lendalo elenziwe nguMhlaba. Asisebenzisi kwizinto zokwenziwa okanye ezenziwe ngeelebhu "zamatye".
Izinto enizibonayo nina, Yintoni Bantundini
ifoto gem ngamnye we gem Eyona niya kufumana. Asazi ukusebenzisa iifoto stock okanye iifoto efanayo ngamatye ezahlukeneyo.
Onke amanqaku ngentla zixhaswa yi yethu 100% imali-umva siqinisekiso. Siyabaxhasa ubuncwane bethu, njengoko abathengi bethu uya kuba nathi.
Iinketho Intlawulo nkqubo
Ukukhangela-phandle sikhuselekile, ekhuselekileyo kunye lula kunye GEMIC Laboratory.
Sinikeza ndlela zilandelayo bhetyebhetye intlawulo lokuqukumbela umyalelo wakho:
Pay ngecredit card nge PayPal (akukho akhawunti iPayPal efunekayo)
PayPal yamkela Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, EuroCard, Maestro kunye American Express. ulwazi yokhuseleko PayPal.
Hlawula akhawunti yakho PayPal
Siye wayelilungu PayPal zingqinisiswe.
Phawula: Ukuba ngaba awunayo i-akhawunti, ungenza ngokulula ukuvula i-akhawunti entsha ngokulandela imiyalelo kwi-screen.
Hlawula ezithunyelweyo Western Union
Xa uhlawula transfer Western Union, izinto zakho ziya kugcinelwa iintsuku ezintathu. Nceda imeyli kule nombolo imali transaction eyodwa (MTN #) sokudluliselwa yakho. Xa imali ziye zafunyanwa, siza kuqwalasela umyalelo wakho.
Phawula: imirhumo yokuGqithisela kufuneka ayinakutsalwa imali ifunyenwe.
Hlawula nge banki ngqo
Xa uhlawula ngebhanki ngqo, izinto zakho ziya kugcinelwa iintsuku ezintathu. Nceda imeyli yebhanki ikhowudi transfer yesalathiso xa aye aqalwa intlawulo. Xa imali ziye zafunyanwa, siza kuqwalasela umyalelo wakho.
Nje ukuba ulungele ukuphuma:
Hlaziya inqwelo yakho yokuthenga kwaye ukhethe indlela yakho yokuthumela. Sinikezela ngezi ndlela zimbini zokuhambisa kunye namaxabiso; Fedex (Iintsuku ezi-3-4)
Umgangatho oMiselweyo weHlabathi weHlabathi Jikelele (kwiintsuku ezili-10-21)
Cofa "qhubeka uphume" kwaye ufake idilesi yokuthumela.
Khetha indlela yakho yokuhlawula kwaye ucofe u "hlawula ngoku".
Faka ulwazi lwakho lokuhlawula, okanye uprinte imiyalelo eskrinini yokuhanjiswa kwemali.
Nje ukuba iodolo yakho ibekwe ngempumelelo, uya kufumana i-imeyile yokuqinisekisa evela kuthi kwidilesi yemeyile.
Phawula: Nceda uqiniseke ukongeza idilesi ye-imeyile ukuze uqinisekise ukuba unokufumana ukuthunyelwa kunye noku-odola ii-imeyile. Ukuba awufumani nayiphi na i-imeyile evela kuthi, nceda uqiniseke ukuba ujonga ugaxekile okanye ifolda ye-imeyile ye-junk
Ikhadi letyala kunye neentlawulo zePayPal ziya kuhlawulwa ngayo nayiphi na imali. Ukuhlawulwa nge-Western Union okanye ngokudluliselwa kwebhanki kufuneka kuthunyelwe ngeedola zase-US.
Xa ukhetha imali engeyiyo idola yaseMelika, ireyithi yotshintshiselwano yosuku lwangoku iya kusetyenziswa ukuguqula amaxabiso abonisiweyo.
I-PayPal kunye nebhanki yakho eqhubayo (ikhadi lokuthenga ngetyala elikhupha ibhanki) liza kusebenzisa amaxabiso abo otshintshiselwano ukuguqula iimali, ngenxa yoko, iintlawulo kwimali oyikhethileyo ziya kwahluka kancinci kumaxabiso aboniswe kuloo mali kwiwebhusayithi yethu.
I-GEMIC iya kubiza kuphela isixa esibonisiweyo. Nayiphi na imali eyongezelelweyo ixhomekeke ngokukodwa kwi-PayPal's, ikhadi lakho letyala elikhupha imigaqo-nkqubo yebhanki okanye ye-Western Union.
Ukuba unengxaki ngokwenza intlawulo okanye ungathanda ukuxoxa ngezinye iindlela zokuhlawula, nceda ukhululeke Qhagamshelana nathi.
Nceda ujonge apha ngezantsi ukuze Iinketho zethu ngeeNqanawe:
Ukuhambisa ngenqanawa-i-USD 35
Ukuhambisa ngenqanawa kudla ngokuthatha iintsuku ezingama-3-4 zokuhanjiswa kwaye kunokukhangelwa kwi-intanethi kuwo onke amanyathelo endlela. Iipasile zikhuselwe ngokupheleleyo. Utyikityo luyafuneka xa kuziswa. Ukuhanjiswa ngoMvulo ukuya ngoLwesihlanu kumazwe amaninzi. Azikho iibhokisi ze-PO (ngaphandle kwe-UAE, Saudi Arabia ne-Kuwait), iidilesi ze-APO okanye ze-FPO ezinokusetyenziswa.
Phawula: Ukuba unayo 'utyikityo kwifayile', nceda tsalela i-EMS ukurhoxisa olu gunyaziso. Iipakeji ezithunyelwa ngaphandle kokutyikitywa, ngenxa 'yokutyikitywa kwifayile' azinakho ukugqunywa ngumphathi weinshurensi
Iposi esemgangathweni ebhalisiweyo- i-USD 7
Sinikezela nge-imeyile ebhalisiweyo kumazwe angaphezu kwe-120. Iposi ebhalisiweyo i-inshurensi ukuya kuthi ga kwi-USD 200. Ukuhanjiswa ngenqanawa kuthabatha malunga neentsuku ezili-10 ukuya ku-21 zomsebenzi kwaye kufuna ukusayinwa xa kuziswa. Akukho zithunyelwayo ngeCawa.
Onke amatye aboniswe 'njengafumanekayo' asesitokisini kwaye alungele ukuthunyelwa kwangoko. Ii-odolo zenziwa ngaphakathi kosuku olu-1 lokusebenza ngoMvulo-Lwesihlanu (ngaphandle kweeholide)
Kumazwe amaninzi ukuthunyelwa ngokufanelekileyo kuthunyelwe kumatyala ahlawulwayo kunye nerhafu. I-imeyile ebhalisiweyo ithatha ixesha elide, kodwa ihlala ithintela imali eyongezelelweyo. Siyavuya ukuhanjiswa njengoSipho, kodwa nceda uqaphele ukuba asinakulawula ngaphezulu kweendleko ezongezelelweyo ezinokuthi zenzeke kwilizwe lakho.
Phawula: Irhafu yokungenisa elizweni okanye uxanduva ngumthengi. Ukuhanjiswa okubuyisiweyo okwaliwe ngenxa yezo ntlawulo akunakwamkelwa. Ungaqhagamshelana nathi ukuba ufuna nawaphi na amalungiselelo akhethekileyo.
Zonke iiphakheji ezivela kwi-GEMIC zibandakanya i-invoice epheleleyo. Ndiyacela Qhagamshelana nathi phambi kokufaka i-odolo yakho, ukuba udinga invoyisi yokwemfuneko okanye akukho invoyisi konke konke.
Colored gemstone icace Isikali
I-GEMIC isebenzisa le ndlela ilandelayo yokucacisa xa igrade miyala:
IF : Icocekileyo licocekile - alinasiphako ngaphakathi; Mahala inclusions.
VVS : Phantse i-loupe icocekile-kakhulu, inclusions encinci kakhulu; inclusions akubonakali kangako phantsi kokuphakanyiswa kwe-10x.
VS : Ukucoceka kwamehlo - ukufakwa okuncinci kakhulu; ukufakwa okuncinci kunokubonwa ngamehlo aqeqeshiweyo okanye ukukhulisa okungaphantsi kwe-10x.
SI : Kubandakanyiwe kancinci- ukufakwa okuncinci kunokubonwa ngamehlo.
I : Kubandakanyiwe- ukufakwa kunokubonwa ngamehlo.